မုန်တိုင်းကိစ္စနဲ.စပ်လျဉ်း၍ ခိုးဝှက်ထားသော အလှူငွေများပြန်ပေးပါ | Ethnic Nationalities' Voice: Struggling Voices for Justice
တိုင်းရင်းသားအသံ တရားမျှတမှုအတွက်တိုက်ပွဲဝင်အသံများ	မုန်တိုင်းကိစ္စနဲ.စပ်လျဉ်း၍ ခိုးဝှက်ထားသော အလှူငွေများပြန်ပေးပါ	July 26, 2008
တိုင်းရင်းသားအသံမုန်တိုင်းကိစ္စနဲ.စပ်လျဉ်း၍ ခိုးဝှက်ထားသော အလှူငွေများပြန်ပေးပါ
မြန်မာပြည်၏ငွေလဲလှယ်နှုန်းစနစ်ဆိုးကြောင့် မုန်တိုင်းဒုက္ခသည်များအတွက် လှူထားသော အလှူငွေများ ၂၅ ရာခိုင်းနှုန်းပျောက်ဆုံးနေသည့်သတင်းကို ကုလက ဝန်ခံပြောဆိုပြီးနောက် ယင်ပျောက်ဆုံးသွားသောအလှူငွေများကို ပြန်ပေးပါရန် မောင်သန်းရွှေဆီအကြွေးတောင်းဖို.အလှူရှင်နိုင်ငံအများစုမှ ဥပဒေပြုသူများက ပြင်ဆင်နေကြကြောင်းသိရှိရပါသည်၊ အလှူငွေများ FEC နဲ.ဘယ်လောက် လဲလှယ်ထားသလဲ၊ ဘယ်လောက်ဆုံးရှံးသွားသလဲဆိုသည့်မေးစရာမေးခွန်းများသည် ကုလ၏ငွေရေးကြေးရေးစနစ်ကို ကိုင်တွယ်လုပ်ဆောင်နေသော United Nations Development Program လို.ခေါ်တဲ့ ကုလဖွံ.ဖြိုးရေးစီမံကိန် အား ကုလရုံအခြေစိုက် Inner City Press ကမေးပြန်တော့လဲ ဘာမှအဖြေမပေးနိုင်ဘဲဖြစ်နေတယ်၊
ကုလ၏လူသားချင်းထောက်ပံ့ရေးဆိုင်ရာပေါင်းစပ်ဆောင်ရွက်ရေးရုံ Office for the Coordination of Humanitarians Affairs ( OCHA) ကလဲ အချက်အလက်တွေဘာမှမပေးနိုင်သေးပါ၊ သို.သော်၊ OCHA ၏ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ က Inner city press ကို ခေါ်တွေ.ပြီး အလှူငွေအနည်းငယ်ပျောက်ဆုံးသည့်အကြောင်းကို John Holmes ကဝန်ခံပြောဆိုပြီး အများကြီးဆုံးရှံးသွားတာမဟုတ်သည့်အကြောင်းကို ရှင်းပြသည်၊မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလူသားချင်းထောက်ပံ့ရေးဆိုင်ရာပေါင်းစပ်ဆောင်ရွက်သူ Dan Baker ကလဲ အရင်တုန်ကပျောက်ဆုံးမှုမရှိဘူးလို. ပြောခဲ့ပြီး အခုကျမှ ပျောက်ဆုံးတစ်ချို.ရှိတယ်လို.ပြောပြန်သည်၊ ဒါပေမဲ့၊ အရေအတွက်မသိသောထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းတစ်ချို.ဟာ မြန်မာပြည်မှာ ဝယ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလို. ပြောနေပေမဲ့ အရေအတွက်ဘယ်လောက်လဲဆိုတာမပြောပါဘူး၊
လွန်ခဲ့သော သောကြာနေ.တုန်းက နယူယောက်ရှိကုလရုံချုပ်မှာ ရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်နေတုန် ကုလအတွင်းရေးမှူးချုပ်ဘန်ကီမွန်း၏ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Michele Montas ကိုကုလအနေနဲ. FEC နှင့်ဘယ်လောက်လဲလှယ်ခဲ့သလဲ၊ဘယ်လောက်ဆုံးရှံးခဲ့သလဲနဲ.ပတ်သက်၍ Inner City Press က ဒုတိယအကြီမ်အဖြစ်တိုက်ရိုက်မေးမြန်ခဲ့ပါသည်၊ မစ် Michele Montas ကလဲ ဂျူလိုင်လ ၂၈ ရက်နေ.အထိစောင့်ပါ ဟု OCHA ရုံအရာရှိ John Holmes ကိုရည်ညွန်းလိုက်ပြန်သည်၊
အလှူငွေအတွက် ဒေါ်လာသန်ပေါင်း ၂၀၀၊ပြီးတော့ သန်းပေါင်း ၃၀၀၊ အဲဒီလို OCHA ရုံအနေနဲ. လိုက်တောင်းနေတာနဲ.ပတ်သက်၍ Inner City Press က လွန်ခဲ့သောနှစ်ပတ်လောက်ကတည် မေးမြန်စုံစမ်းခဲ့ပါသည်၊ဒါပေမဲ့၊ ရှင်းရှင်းလင်းလင် ဂဏန်းအတိအကျကို အခုအချိန်အထိမရရှိသေးပါ၊ဒီကိစ္စလဲဘဲ၊ အလှူရှင်များနှင့် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများမှ ဥပဒေပြုသူများ စောဒကတက်မေးမြန်စရာရှိသည်၊
နာဂစ်မုန်တိုင်းကာလမတိုင်ခင်ကလဲ မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကုလ သမဂ္ဂဆိုင်ရာ ရုံဌာနအများစုက ဒေါ်လာနှင့် အက်ဖ်အီစီ ငွေလဲလှယ်နှုန်းကြောင့် ၁၅ ရာခိုင်းနှုန်းလောက်ဆုံးရှံးခံနေပြီသာဖြစ်ပါသည်၊ ဒါပေမဲ့။ သတင်းကတော့၊ Inner City Press ဆီရောက်လာပြီး အသေးစားငွေကြေးစီမံကိန်း လို.ခေါ်သည့် ကုလသမဂ္ဂဖွံ.ဖြိုးရေးစီမံကိန်း၏ လုပ်ဆောင်ချက်ဟာ အနိမ့်ဆုံးငွေလဲလှယ်နှုန်းကို လက်ခံထားသဖြင့် ယင်ကိစ္စနဲ.ပတ်သက်၍ ယူအန်ဒီပီအနေနဲ. တုံ.ပြန်ချက်ပေးဖို.ငြင်းခဲ့သည်၊ ယူအန်ဒီပီက မြန်မာစစ်အစိုးရကို ဒေါ်လာတွေပေးပြီး ပြည်တွင်းသုံးကျပ်ငွေကိုအနိမ့်ဆုံးလဲလှယ်နှုန်းဖြင့်ရယူပါသည်၊ယူအန်ဒီပီအနေနဲ.ဒေါ်လာနှင့်အက်ဖ်အီစီဘယ်လောက်လဲလှယ်ခဲ့တာ၊ ဘာဈေးနှုန်းနဲ.လဲခဲ့တာတွေကိုအခုအချိန်အထိဘာမှထုတ်ပြန်တာမရှိသေးပါ၊ ယင်ကိစ္စနဲ.ပတ်သက်၍ ယူအန်ဒီပီ စီမံခန်.ခွဲမှုတာဝန်ခံ Kemal Davis ကို Inner City Press က မေးလိုက်သည်၊ သူက၊ လမ်အကြားမှာမေးတဲ့မေးခွန်းကို ကျနော် မဖြေဘူးလို. ပြန်ပြောသည်၊သူကနွေရာသီအကုန်မှာ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ပေးကောင်းလုပ်ပေးနိုင်မည် လို. ထင်ပါရဲ.၊ အများစုက အရမ်းနောက်ကျတယ်လို. သတ်မှတ်တယ်သတဲ့။
ဆီလျော်အောင် မင်းကန်စီ ကဘာသာပြန်ထားသည်။
As UN Admits 25% Loss in Myanmar, Demand for Return of Cash Grows, No UNDP Answers
UNITED NATIONS, July 25 — As news of the currency exchange losses the UN accepted in Myanmar belatedly spreads, legislators in many donor countries which responded to the UN’s appeals for Cyclone Nargis humanitarian assistance are preparingademand that the “stolen” aid money be returned by the Than Shwe government. Meanwhile, the UN cannot or will not provide basis information about how much of the donated money it exchanged into devalued Foreign Exchange Certificates. Two weeks ago, Inner City Press requested this figure from the UN Development Program, which handles UN system finances, but beyond an admission that UNDP buys FECs through the Myanmar Foreign Trade Bank, no dollar figure has provided. Nor has the UN Office for the Coordination for Humanitarian Assistance provided any figures. Rather, OCHA’s acting spokesperson called Inner City Press to insist that OCHA’s John Holmes admittedaloss, but not an “extraordinary” loss, as DPA reported inastory noting Inner City Press’ work for the last month on the issue. Inner City Press at OCHA’s request dropped “extraordinary” from the quote, despite not receiving any proof. The UN’s Humanitarian Coordinator in Myanmar Dan Baker, who previously on camera told Inner City Press that there are few to no losses, now admits there are some — but claims that some unquantified percentage of material is bought outside of Myanmar. Where are the numbers? UNDP’s Kemal Dervis, at left, with WFP Sheeran Shiner, lost money not shown At Friday’s noon briefing at the UN in New York, Inner City Press asked Ban Ki-moon’s spokesperson Michele Montas for the second straight day for numbers of how much the UN converted into FECs, and how much was lost. Video here. Ms. Montas again deferred untilaJuly 28 appearance by OCHA’s John Holmes. Since OCHA asked for $200 million and then $300 million for Myanmar, and has been asked about this issue by Inner City Press for more than two weeks, not having basic numbers now is inexplicable. Expect this, too, to be raised by legislators from donor and neighboring countries.
Even before Cyclone Nargis, much of the UN system in Myanmar was acceptinga15% loss in converting dollars to FECs. But word has reached Inner City Press, and UNDP has as noted refused to respond, that UNDP in its so-called micro-finance program accepted an even worse exchange rate. Back on June 26, Inner City Press reported that the UN through UNDP “paid dollars to Myanmar’s government, and got local currency back at an artificially low official exchange rate.” UNDP has still not provide information about how much money it converted through FECs, and at what rate. On July 25, Inner City Press put the question directly to UNDP Administrator Kemal Dervis, who responded that “I don’t answer questions in the hallway” and that he might holdapress conference at the end of summer. Far too late, most would think. Watch this site. And this —
ကုလသမဂ္ဂနဲ.ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်မလား? ကြီးမားသောဖိအားပေးမှုနဲ. ရင်ဆိုင်မလား?
စစ်တပ်ပိုင်သောတိုင်းပြည်ဖြစ်အောင်ကြိုးပမ်းနေသည့် သန်းရွှေတို.အုပ်စုကို ဟစ်တလားသမိုင်းသင်ပေးကြလော့